Kuboshwe osolelwa ukubulala intombi nonina wayo | News24
Kuboshwe osolelwa ukubulala intombi nonina wayo
KUBOSHWE owesilisa oneminyaka engu-36 ngoLwesihlanu oledlule ongumsolwa emacaleni amabili okubulala kanye nokutholakala nesibhamu esingekho emthethweni kanye nezinhlamvu, kusho amaphoyisa aKwaZulu-Natal.
Okhulumela amaphoyisa, u-Lieutenant Colonel Thulani Zwane uqhube wathi umsolwa uvele enkantolo yeMantshi yaseKranskop ngoMsombuluko kanti ugcinwe ngaphakathi ezitokisini njengoba ezobuyela enkantolo ngomhlaka 27 kuNtulikazi (July).
Uthe: “Ngomhlaka 7 kuNtulikazi, ngabo 10 ebusuku, umsolwa wafikela ekhaya lezisulu endaweni yasEkwazini, eKranskop. Kubikwa ukuthi umsolwa wayevakashele intombi yakhe. Kusolakala ukuthi umsolwa wadubula bashona intombi yakhe eneminyake engu-25 kanye nonina wayo oneminyaka engu-50 emuva kokuthi bebe nengxabano nomsolwa. Emuva kwalesi sigameko umsolwa wabaleka,” kusho uMnuz Zwane.
Uqhube wathi amaphoyisa aseKranskop avula amacala amabili okubulala kanti akuthathanga ngisho isikhathi esingaphezulu kwamahora angama-24 ukuba abaphenyi bebophe umsolwa.
Uthe: “Umsolwa uboshwe KwaDukuza ekuseni ngoLwesihlanu kanti amaphoyisa athole isibhamu endaweni yaseNanda okusolakala ukuthi sasetshenziswa kulesi sigameko,” kusho uMnuz Zwane.
UKhomishana wamaphoyisa KwaZulu-Natal uMnuz Bhekinkosi Langa uncome amaphoyisa ngomsebenzi awenzile.
Uthe: “Sinxusa amalungu omphakathi ukuba abikele amaphoyisa ngabantu abanezibhamu ezingekho emthethweni ngoba zinomthelela ekubulaweni kwabantu abamsulwa,” kusho uMnuz Langa.